Fandikanteny #RightsCon: Antso ho an’ny miteny Arabo, Frantsay ary Espaniola · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2018 15:35 GMT
RightsCon Toronto 2018 no hetsika faha-7 amin'ny Andiana Vovonana RightsCon. Io no iray amin'ireo fihaonambe manerantany lohalaharana miresaka zon'olombelona amin'ny vanim-potoana nomerika, ahitana fifanakalozan-kevitra sy ny resadresaka lehibe sy manan-danja manerana izao tontolo izao. Mitady mpandika teny mpilatsaka an-tsitrapo miteny Arabo, Frantsay ary Espaniôla izahay mba hanampy ireo ezaka amin'ny fandikanteny maromaro amin'ny vovonana Rightscon ny 16 ka hatramin'ny 18 May any Toronto.
Teo aloha, niara-niasa tamin'ny Access now sy ny Global Voices Lingua ny Meedan mba hampivelarana ny Efitra Fandikanteny RightsCon .
“Miasa amin'ny hevitra tsotra ny Efitra Fandikanteny RightsCon : andao handika teny ireo Sioka tsara indrindra ao amin'ny #RightsCon ho amin'ny teny Espaniôla, Frantsay ary Arabo.”
Tamin'ny taona 2016 dia nandika teny sioka miisa 127 ho amin'ny teny Arabo izahay, sioka miisa 568 ho amin'ny teny Frantsay ary 286 ho amin'ny teny Espaniôla. Niasa tamin'ny fandikanteny mihoatra ny iray mihitsy aza ny sasany tamin'ireo mpandika teny !
Andao hanao izany indray amin'ity 2018 ity!
Hanokana fotoana vitsivitsy mialoha ny fihaonambe ireo mpilatsaka an-tsitrapo mba hiofana momba ny fomba fampiasana ny fampiharana, ary hiasa miaraka amin'ny ekipa Meedan izy ireo mba hifankazatra amin'ny Bridge.
Raha mpandika teny miasa amin'ny teny Arabo, Frantsay na Espaniôla ianao, ary maniry ny hanohana ity tetikasa fandikanteny ity, dia miangavy anao mba hameno ity pejy fisoratana anarana ity. Raha te hamantatra bebe kokoa ny fomba ahafahanao mandray anjara ianao dia mifandraisa amin'i Noha Daoud noha@meedan.com na Wafaa Heikal wafaa@meedan.com.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 22 ora izay
“Andran-tsiro” ihany amin'ny fetibe amin'ity taona ity no ho azon'ireo mpitia Karnavaly ao Trinidad sy Tobagoa amin'ity taona ity, saingy ho tian'izy ireo ve izany ?